Vaovao - Fantson'ny zavamaniry Bagasse
Melanoma dia tsy mitana afa-tsy 4% amin'ny homamiadan'ny hoditra rehetra fa anisan'ireo neoplasma mahafaty mahafaty indrindra. Dacarbazine dia zava-mahadomelina safidy amin'ny fitsaboana melanoma any Brezila amin'ny alàlan'ny rafitry ny fahasalamam-bahoaka noho ny fahalafosany. Na izany aza, izy dia alkylating agents of lowity spity sy elicits valiny fitsaboana amin'ny 20% fotsiny amin'ny tranga. Ny fanafody hafa misy amin'ny fitsaboana melanoma dia lafo, ary ny sela fivontosana matetika dia manohitra ny fanoherana ireo fanafody ireo. Ny ady amin'ny melanoma dia mitaky zava-mahadomelina vaovao sy mazava kokoa izay mahomby amin'ny famonoana sela fivontosana mahazaka zava-mahadomelina. Dibenzoylmethane (derivatives 1,3-diphenylpropane-1,3-dione) dia mpandraharaha antitumor mampanantena. Amin'ity fandinihana ity dia nanadihady ny vokatry ny cytotoxic an'ny 1,3-diphenyl-2-benzyl-1,3-propanedione (DPBP) amin'ny sela melanoma B16F10 ary koa ny fifandraisany mivantana amin'ny molekiola ADN izay mampiasa tweezers optika. DPBP dia nampiseho valiny azo antoka momba ny sela fivontosana ary nanana index selectivity of 41.94. Ary koa, nasehonay ny fahafahan'ny DPBP hifandray mivantana amin'ny molekiola ADN. Ny zava-misy fa ny DPBP dia afaka mifandray amin'ny ADN in vitro dia ahafahantsika mieritreritra fa ny fifandraisana toy izany dia mety hitranga amin'ny vivo ary, noho izany, ny DPBP dia mety ho fomba hafa hitsaboana ireo marary manana melanoma mahazaka zava-mahadomelina. Ireo fikarohana ireo dia afaka mitarika ny famolavolana fanafody vaovao sy mahomby kokoa.
Ny sakan'ny isan-jaton'ny fahafatesan'ny sela azo avy amin'ny fangaro DPBP manohitra ny tsipika melan-A sy B16F10 amin'ny fifangaroana samihafa. Ny mari-pahaizana mifantina (SI = IC50 melan-A / IC50 B16F10) dia 41.94.
Natontan'i Elsevier BV
Dibenzoylmethane (DBM) dia mpiorina amin'ny licorice ary β-diketone analogue of curcumin. Ny famahanana DBM 1% amin'ny sakafo amin'ny totozy Sencar nandritra ny fanombohana sy ny vanim-potoana taorian'ny fanombohana dia nanakana mafy ny 7,12-dimethylbenz [a] antrasene (DMBA) vokatry ny fivontosan'ny fivontosan'ny mammary ary ny fihenan'ny fivontosan'ny mammary 97%. Mandritra ny fandalinana vivo bebe kokoa mba hamaritana ireo mety ho mekanisma amin'ny hetsika fanakanana ny DBM, ny famahanana ny 1% DBM amin'ny sakafo AIN-76A amin'ny totozy Sencar tsy matotra mandritra ny 4-5 herinandro dia nampihena ny lanjan'ny lena ao an-tranonjaza tamin'ny 43%, nanakana ny taham-pitombo ny sela epithelial mammary glandy amin'ny 53%, epithelium utérine amin'ny 23%, ary stroma utérine dia 77%, rehefa novonoina ny totozy nandritra ny dingana estrus voalohany amin'ny tsingerin'ny estrous. Ho fanampin'izany, ny famahanana DBM 1% amin'ny sakafo amin'ny totozy Sencar tamin'ny tapa-bolana talohan'izay, nandritra ary 1 herinandro taorian'ny fitsaboana DMBA (fampidirana DMBA 1 mg isan-kerinandro indray mandeha isan-kerinandro mandritra ny 5 herinandro) dia nanakana ny famolavolana addayo DMBA - ADN tanteraka amin'ny mammary ny fihary ao amin'ny 72% amin'ny alàlan'ny fametahana aorian'ny fametahana marika 32P. Noho izany, ny famahanana sakafo 1% DBM ho an'ny totozy Sencar dia nanakana ny fananganana fangaro DMBA-ADN amin'ny fihary mammary ary nampidina ny taham-pitomboan'ny fihary mammary in vivo. Ireo valiny ireo dia mety hanazava ny fihetsika mahery fanakanana ny sakafo DBM amin'ny carcinogenesis mammary amin'ny totozy.
Fotoana fandefasana: Aug-12-2020